မွန်ပြည်သစ် ပါတီနှင့် လားဟူဒီမိုကရက်တစ် အစည်းအရုံးတို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်တွင် NCA လက်မှတ်ရေးထ? - Yangon Media Group
မွန်ပြည်သစ် ပါတီနှင့် လားဟူဒီမိုကရက်တစ် အစည်းအရုံးတို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်တွင် NCA လက်မှတ်ရေးထ?
မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် လားဟူဒီမိုကရက်တစ် အစည်းအရုံးတို့သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်တွင် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကို နေပြည်တော် MICC–II တွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင့်ဆွေက ”နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၊ လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံးတို့အကြား NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက် နေပြည်တော် MICC–II မှာ ကျင်းပ ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ NCA လမ်းကြောင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ပထမဆုံးလျှောက်လှမ်းလာတဲ့အဖွဲ့ တွေဖြစ်ပါတယ်။ NCA လက်မှတ်မရေးထိုးရသေးဘဲ ကျန် နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း NCA လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ပါဝင်လာဖို့ ဆက်လက်ပြီးကြိုးပမ်း နေတယ်ဆိုတာကိုလည်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၊ လားဟူဒီမို ကရက်တစ်အစည်းအရုံးတို့ကို နွေး ထွေးစွာနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးကြိုဆိုဖို့ တာဝန်ရှိသလို ဒီ NCA စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအောင်အောင် မြင်မြင်နဲ့ကျင်းပပြီးစီးနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဟာ ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ အဓိကတာဝန်ပဲဖြစ်ပါ တယ်။ ယခုအစည်းအဝေးတက် ရောက်လာကြတဲ့သူများအနေနဲ့ (၂၁) ရာစုပင်လုံ အစည်းအဝေး ကျင်းပရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဆောင် က်ဖူးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါတယ်၊ NCA စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ ပထမဆုံးကျင်းပတဲ့ပွဲလို့ဆိုရင်ရပါတယ်။ ယခင်ဆောင်ရွက်ဖူးတဲ့လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံတွေအပေါ်မူတည်ပြီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူအားလုံးက ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက် မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ရေးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်နံနက် ၁ဝ နာရီက နေပြည်တော်ရှိနိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနအစည်း အဝေးခန်းမတွင်ကျင်းပစဉ် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်း ချမ်းရေးဗဟိုဌာန ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီး ဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော် တင့်ဆွေက ယင်းကဲ့သို့ပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်း ရေးဗဟိုဌာန ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံ တော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင့် ဆွေက ”ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့လုပ် ဆောင်တဲ့အလုပ်ကတော့ အားလုံးအင်မတန်မှ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိ တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ပြည်သူလူထုတွေ၊ အထူးသဖြင့် မွန် ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေ၊ လားဟူတိုင်းရင်းသားတွေအထူးဝမ်း သာမယ့်ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးသိရှိထားတဲ့အတိုင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်တဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီနဲ့ လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံးတို့ဟာ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်မှာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့နဲ့ သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး တော့ အဲဒီအဖွဲ့တွေဟာတစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်(ဃြဗ)မှာ ပါဝင်ပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးမယ်ဆိုပြီး သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်အတိုင် ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော် ဌေးက NCA စာချုပ်လက်မှတ် ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပရေး လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ ကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ၏ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။
တရားဝင် မြန်မာသင်္ဘောသား တစ်သိန်းကျော် ရှိသည့်အနက် အလုပ်ရရှိသူ နှစ်သောင်းဝန်းကျင် သာရှိ
ချန်ပီယံလိဂ်နိုင်ပွဲက လက်ကျန်ပွဲများအတွက်တွန်းအားဟု စမောလင်းဆို ၊ ပွဲဆက်များနေသော်လည်း မ
မိုးကုတ်မြို့တွင် လူပေါင်း ၇၀ ကျော် ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းပွဲပြုလုပ်